Ankizy 15 taona no nitondra: nivadibadika ilay Sprinter, olona iray maty, fito naratra | NewsMada
Ankizy 15 taona no nitondra: nivadibadika ilay Sprinter, olona iray maty, fito naratra
Navadibadika intelo ilay Sprinter vao tafajanona. Nisongona fiara, avy eo nifandona tamina kamiao iray. Mbola ankizy tsy ampy taona ny teo amin’ny familiana. Vokany, maty ny mpandeha iray, olona 7 hafa kosa naratra.
Sprinter iray mpanao fitaterana eny Itaosy, saika handeha hanasa fiara eny Fenoarivo, no niharan-doza, omaly tamin’ny 1 ora antoandro, teny amin’ny Digue Malaza Fenoarivo. Voalaza fa nisongona Sprinter iray taxi-be mampitohy an’i Vontovorona izy ity ary nifandona tamin’ny kamiao mpitatitra vato ilay taxi-be Itaosy io.
Vokatr’io fifandonana noho ny fisongonana io, nivadibadika nanao “tonneau” intelo ilay fiara. Vokatr’izay, maty ny olona iray, fito hafa naratra mafy. Naratra ihany koa ny mpamily mpanampy tao amin’ilay kamiao. Naratra mafy ny ankamaroan’ireo olona hafa tao anatin’ilay Sprinter nisongona io.
Anisan’ny naratra ilay mpamily tompon-toerana ary tsy izy no teo amin’ny familiana ny fiara tamin’io fa ny zanaka lahin’ny tompon’ilay Sprinter, 15 taona. Tapa-tongotra izy io, noho izany. Maty kosa ny lehilahy iray hafa naman’ilay mpamily tompon-toerana, nandehaleha niaraka tamin’izy ireo.
Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny fizahana ny loza, nandefa ny marary sy ny maty tany amin’ny hopitaly. Niteraka fitohanana teny amin’iny lalam-pirenena voalohany iny ity loza ity.
Mazava ho azy fa hiakatra fitsarana ny raharaha. Ankizy tsy ampy taona ny teo amin’ny familiana. Tompon’andraikitra ny ray aman-dreny sy ilay mpamily tompon-toerana. Toe-javatra tsy am-pisainana toy izao ny mety hahitan-doza tahaka ity teny Malaza Fenoarivo ity. Sady efa mandika lalàna amin’ny fampitondrana fiara ankizy tsy ampy taona no mbola manao herisetra amin’ny fitondrana fiara ihany koa. Amin’ny ankapobeny, mamoa-doza ka mahafaty olona betsaka eto amintsika ny taxi-be sy ny fiara Sprinter. Andrasana ny fandraisana andraikitra amin’ity karazana fiara ity hampihenana ny loza aterany. Eo ihany koa ny mpamily, manana ny fahaiza-manao mifanaraka amin’ny fiara sy ny tanjany ve?